နိင်ငံခြားသားဖြစ်လို့ လက်မခံဘူးဆိုရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ကပ္ပိလ၀တ် ပြန်ပို့ဖို့ပဲရှိတော့တယ်( ဆရာတော် ဓမ္မစာရ) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရခိုင်က ခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့ ဗမာစစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလာရင် …
Luyechuns Outstanding Students from No9SHS/BEHS (St. Peter’s) 1966 – 1988 »
နိင်ငံခြားသားဖြစ်လို့ လက်မခံဘူးဆိုရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ကပ္ပိလ၀တ် ပြန်ပို့ဖို့ပဲရှိတော့တယ်( ဆရာတော် ဓမ္မစာရ)
လူ့တန်ဖိုးဆိုတာ နိင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်း၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် နိင်ငံခြားသားဖြစ်လို့ လက်မခံနိင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မှုလနေရပ်ပြန်ပို့ဖို့ ပဲရှိပါတော့တယ်လို့ ဆရာတော် ဓမ္မစာရ က ယခုလ ၇ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ သဟဇာတရှိရေးအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာအကြား ဆွေးနွေးမှု (သင့်မြတ်သူများပွဲ) မှာမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။
“နိင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ လူ့တန်ဖိုးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ဖေါ်ရိန်နာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မခံဘူးဆိုရင် ဘုရားကိုပြန်ပို့လိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် ကပ္ပိလ၀တ်ပြည်ကလာတဲ့ ကိုယ်တော်ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဆရာတော် ဓမ္မစာရ ကမိန့်ပါတယ်။
“If you don’t accept ‘foreigners (or people with foreign roots)’ we will just to have ship our (Indian-born) Lord, Gotama the Enlightened, back to his kingdom of origin – Kapilawatta!”
The Rev. Dhammapira, Rangoon,7Sept 2013
Image Via (မြန်မာမွတ်စလင်မ်မီဒီယာ)
This entry was posted on September 8, 2013 at 7:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.